Iividiyo eziDanyazayo kwi-iPhone | IPhone iindaba
Iividiyo eziDanyazayo kwi-iPhone
UIsmael Balaguer | | Iapps zokusebenza, Jailbreak
Ukuhambahamba ujikeleze i-YouTube ndiyifumene:
IMobileCinema yifayile ye- iplagi yeSafari iyasivumela Ukudlala ividiyo ngokukhawuleza, i-iPhone kufuneka ibe nayo jailbreak yenziwe, okwangoku ayixhasi ifemu 2.2.
Faka ngeWindows (PC)
Inkqubo yeFirmware: 1.1.1 - 1.1.4, 2.0-2.1*
Firmware: 2.0 - 2.1*
Ifirmware: 1.1.1 - 1.1.4
Faka nge-PXL (iBrickr / Breezy)
Ifirmware: 1.1.1 - 1.1.2
Ifirmware: 1.1.3 - 1.1.4
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » Iapps zokusebenza » Iividiyo eziDanyazayo kwi-iPhone
Ayisiyo fuck, kodwa kuyabonakala ukuba awuzizami usetyenziso kakhulu kwaye ubeka iindaba ezimbi.
Ewe kusebenza ngokugqibeleleyo kwi-2.2. Ngaphezu koko, kwiwebhu kukho iindawo ezibeka i-2.x, ke ukuba inguqulelo 2.x ikwi-beta.
Ukuvavanywa ndim. nge 2.2
emva koko musa ukujikeleza ... ukuba bekungekho ngale ndlela ngewungazange ufumanise
Ndiyabazi ubukho okoko iqale kwinguqulelo yayo engu-1.4 ke musa ukuba ngumlomo. Kwaye izimvo zam kukuzilungisa iindaba.
Sele ndiyizamile ... inyani kukuba ayilunganga, isidlali setyhubhu esidityanisiweyo sokuba iphone isebenze ngcono.
Ezi ndaba sele ndizithethile kule veki kwiforum.
Indoda ayisiyiyo i-ostia kodwa ukubona iimuvi ze-megavideo kunye nezinye iisayithi kufanelekile.
Ikwayi-beta, iya kuphucula ngokuhamba kwexesha.
Ubuncinci ngo-2.2 ayisebenzi kum, kwividiyo nganye endizama ukuyibona ibeka uphawu lokudlala olugqithisiweyo, kwaye kwi-megavideo isebenza kuphela ukuya kwi-3% kwaye ithi ayinakudlala.
Kodwa nonke nilungile .... Enkosi kakhulu kwiqela leendaba le-iphone, ngokubeka iindaba, nokuba ziyinoveli okanye akunjalo. Umhlaba ugcwele ukungabuleli ... Ikrismesi emnandi
Masihambe ngamalungu athile.
Yiyo i-beta ekwisigaba sokuvavanya kwaye sele besitsho kwiwebhusayithi http://www.imobilecinema.com engazinzanga okwangoku. Ke kuyakufuneka silinde ukuba oku kuguquke.
Ukubulisa ikrisimesi emyoli wonke umntu
UIsmael Balaguer sitsho
antfros, ukuqala ngokuvavanya nganye nganye kwezicelo endithetha ngazo. Ayisebenzi kum nge "iPhone 3G 16 GB firmware 2.2", ukuba iyandisebenzela nge "iPhone 2G 16 GB firmware 2.1" nangona ingekho kakuhle kakhulu iyasilela kancinci. Iyakusebenzela nge-2.2 ... ibonakala intle kakhulu kubahlobo bam, ayenzi njalo ngo-2.2, mhlawumbi ngenxa yokuba siza kuba krelekrele kunawe. Kwelinye icala, ndiyavuya ukuba uyabazi ubukho bayo ukusukela ngo "1.4", ndinyanisekile de ndadibana nevidiyo kwiYouTube ndingabazi ubukho bayo, njengezinye izicelo ezininzi, ezivunyiweyo okanye hayi yiApple, ye-iPhone, loluphi usuku Yonke imihla ndifumanisa, abanye ngamathuba, abanye ndifunde eMacworld, iphonehacks, crunchgear, iphoneworld ... eyona ilungileyo ngoku, eyona iphone, isuka kubo bonke abanye oogxa abasebenza iindaba bazise zonke ...
Abafundi bangavuma okanye bangavumelani nesiqwenga seendaba, ubuncinci kukubeka ecaleni ubukrwada kwaye benze ngentlonipho, asinyanzeli, okungenani mna, ndingumntu kwaye ndiyazenza iimpazamo, ndiyakwamkela ukugxekwa, nangona inye into ugxeka ngokugxeka kwaye omnye ugxeka kwaye enze igalelo, ndiyaphinda, andinguye umntu ongaguqukiyo, ogcina izimvo zakhe njengeenyaniso ezingenakuphikiswa.
I-Salu2, ikrisimesi emnandi kunye neThamsanqa kubo bonke abantu bangomso.
PS: Nabani na ofumana into yokuyithetha 😉
Phendula u-Ismael Balaguer
Ukuba ixhasa i-2.2, kodwa ikwinguqulelo ye-beta.
Kwiintsuku ezi-2 ezidlulileyo ndathumela kwibhlog yam:
Into engenakuba yile kukuba ngaphezulu koku kukho abantu abagxeka abo bachitha ixesha labo benika ulwazi kwabanye, njengoIsmael nje.
Ngamanye amaxesha abo kuthi bafuna iindaba zokwabelana banokusebenzisa umthombo ongalunganga.
Ndicinga ukuba izinto zinokuthethwa ngokwahlukileyo kwaye ngekratshi elincinci.
Ndiyifakile kabini kwi-3g 16gb inguqulelo 2.1 kwaye ayisebenzi, kukho isangqa esalelweyo esinomhla wokuhla.
UCarlos Bernia sitsho
Mholo!! Ndine-imobilecinema efakiweyo kwaye akukho ndlela yokubona iividiyo kuyo nayiphi na iwebhusayithi! Ndihlala ndibona i icon eyonwabisayo engqukuva ngonxantathu ongeneyo ...: ((Ngaba kukho nto ndiyiphosileyo? Ndinenguqulo 2.0
Phendula CArlos Bernia
Ukukopela iSim City